Usuku My Pet » Izindlela Thola Uthando Ukuphila Kwakho Little Akwaziwa
Nakuba sonke isithombe sokuthi ukhanda ufeza indima ebalulekile falling in love, izenzo zethu zingaba ngezinye izikhathi zikhuluma. Ngezansi, siye basembule izindlela ezahlukene ungathola uthando impilo yakho.
Little Laziwa Way #1: Yiba Okulungele Ngothando
Ukuba nobuhlobo kuthatha isikhathi, ukuzibophezela, engozini. Isihluthulelo nobudlelwano obuhle futhi ophumelelayo uzithande kuqala, ngoba lolu thando ikuvumela ukuba bathande ngempela omunye umuntu. ubudlelwano obuqinile, wedwa nabanye, Lakhiwe phezu trust, ukwethembeka, kanye nokukhulumisana.
Little Laziwa Way #2: Yazi futhi Aqaphele Standards Yakho
Nakuba kuba okungalungile ukwahlulela umuntu ngokuphelele amaphutha abo, kubalulekile ukuba ukusungula mingcele. Sonke siyazi ukuthi kukhona imicabango ethile futhi ukuziphatha kungathiya ubuhlobo bakho. Siyazi futhi ukuthi kukhona okunye ukuziphatha nezici asifuni futhi badinga in a ubuhlobo. Ukwazi lawo kuzosiza iholele ekutholeni ephawulekayo nezinye yakho.
Little Laziwa Way #3: Yazi umahluko phakathi Person Nonothando uthando lwabo
Akukho lutho beats kokuba othandweni; Nokho, Ngezinye izikhathi lo muzwa overpowers imicabango eyiqiniso mayelana umlingani wethu. Kubalulekile ukuba banake ukuthi ungakwazi ukuhlukanisa phakathi izimfanelo core komuntu futhi yibo ukuphoqelela kwabo.
Little Laziwa Way #4: Ube ongenaphutha Place Ngesikhathi Esifanele
Kukhona izindawo ezithile lapho thina nje bazizwa njengesondo esiyikho element yethu. Kungakhathaliseki kungcono at hora ezimnandi nabangane, ekhonsathini noma ubuciko show, noma ngesikhathi ikilasi, kube khona. ubuntu Yakho bayokhanya, ekudonseleni abantu kuwe.
Little Laziwa Way #5: Lwela for Intimacy Emotional ngaphambi Intimacy Physical
With ekutholeni “uthando impilo yakho”, i yesibopho esingokomzwelo letisetulu kubalulekile. Nakuba egijimela ekubeni nobuhlobo somzimba akusona ngempela into embi, it angenza yesibopho esingokomzwelo nzima ukuba baphumelele kulolu.
Little Laziwa Way #6: awuzethembi
Lalela umuzwa wakho, sithokomale ukuthatha isikhathi sakho, futhi ube nesineke lapho izahlulelo zakho. Ngesikhathi esifanayo, kubalulekile ukuba ihlale ivuliwe ukuze imibono emisha kanye nokubona othandweni.
Kungakhathaliseki isiphelo sayo, lezi zindlela omncane owaziwa, noma kokubili – kubalulekile ukuba ungayeki ukuzama othandweni lweqiniso. Ngoba once une it, kuba umuzwa ozuzisa kunayo yonke emhlabeni.